Xog Yaableh oo kasoo baxeysa Shaqsigii ka dambeeyay Xilka Qaadistii Xaaf lagu sameeyay & Afgambi dhicisoobay. | SOMALI SUN |
Xog Yaableh oo kasoo baxeysa Shaqsigii ka dambeeyay Xilka Qaadistii Xaaf lagu sameeyay & Afgambi dhicisoobay.
Sep 26, 2017 - Aragtiyood
Sida aan horey idinkugu sheegnay Axmed Shariif oo horey looga guuleystay Doorashada Maamulka Galmudug ayaa Magaalada Cadaado ka wado ololo uu ku doonayo inuu xilkaas ku fadhiisto isagoo u marayo hab aan sharci aheyn dastuurkana uusan qabin.
Axmed Shariif iyo Liiban Shuluq oo ahaa gacan hayihii Madaxweynihii hore ee Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa Hotel ku yaal Magaalada Cadaado ku qabtay kulan ay isugu keeneen in ka yar 20 Xildhibaan kuwaas oo ku dhawaaqay inay xilkii ka qaadeen Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf.
Xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay inuu Axmed Shariif Caawa isku dayey inuu afgambi ku sameeyo maamulka galmudug.
Xildhibaano ka tirsan Maamulkaas ayaa yiri : ” Axmed Shariif nin la yiraah ayaa caawa isku dayey inuu Afgami ku sameeyo maamulka Galmudug markii uu qol ku xirtay xildhibaano 15 ah” .
Axmed Shariif oo loolan adag la galay Xaaf ayaa howshaan soo bilaabay ilaa xilligii ay doorashada dhacday, wuxuuna garab ka heystaa dowladda Soomaaliya isagoo adeegsanayo lacag iyo Ciidamo wato ilaa 6 gaari oo kuwa dagaalka ah.
Falka uu Wado Axmed Shariif ayaa keeni doono inuu burburo Maamulka Galmudug, maadaama uu ka shaqeenayo inuu iska hor keeno dadka Walaalaha ah ee ku midoobay maamulkaas.
Dabagal lagu sameeyay tirada ay kala heli karaan labada dhinac ee Cadaado isku hayo ayaa soo ogaatay inuusan jirin hal garab oo heli karo 46 Xildhibaan oo ah tirada xilka looga qaadi karo Madaxweyne Xaaf iyo ku xigeenkiisa.
Ilaa 20 Xildhibaan oo ka tirsan Galmudug ayaa ka maqan Magaalada Cadaado, marka laga reebo tirada guudna waxaan macquul aheyn inay labada dhinac helaan tiro gaareyso 46 midkoodna, maadaama Xildhibaanada ay u kala jabeen laba dhinac kuwa taageersan Xaaf iyo kuwa kasoo horjeedo.
Odayaasha kasoo jeedo Deegaanada Galmudug ayaa ka digay falka uu wado Axmed Shariif oo doonayo inuu mar uun kursigaas ku fadhiisto isagoo aan fiirineyn danta Galmudug iyo shacabka deeganadaas oo aan xilligaan diyaar u aheyn dagaal sokeeyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa looga baahan yahay inay arrintaan xal ka gaarto, isla markaasna ay ka fogaato inay qaado tallaabo dadkaas walaalaha ah iska hor keeni karo, wax kastana lagu dhameeyo wadahadal iyo miiska korkiisa intii dhinac lala safan lahaa sida ay sheegeen Odayaasha dhaqanka Habargidir oo maanta kulan xasaasi ahaa ku yeeshay Magaalada Muqdisho.